सशस्त्र प्रहरीद्वारा गाँजा बरामदसुनसरी, सुनसरी जिल्लाको भोक्राहा नरसिंह नगरपालिका ८ सिसुवा धरमपुरस्थित सीमा ईलाकाबाट जेठ २५ गते सशस्त्र प्रहरीले करीव १ सय के.जी. गाँजा बरामद गरेको छ । सोही ठाउँको मकै बारीमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको उक्त गाँजा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट उल्टीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेको हो । बरामद गाँजा नेपाल प्रहरीलाई बुझाईएको छ ।
सुनसरी, सुनसरी जिल्लाको भोक्राहा नरसिंह नगरपालिका ८ सिसुवा धरमपुरस्थित सीमा ईलाकाबाट जेठ २५ गते सशस्त्र प्रहरीले करीव १ सय के.जी. गाँजा बरामद गरेको छ । सोही ठाउँको मकै बारीमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको उक्त गाँजा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट उल्टीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेको हो । बरामद गाँजा नेपाल प्रहरीलाई बुझाईएको छ ।